Indoda ye-Aquarius ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda ye-Aquarius ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula
Indoda ye-Aquarius ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula
Indoda ye-Aquarius ayiboni abafazi njengezinto zesondo ngaphandle kokuba umfazi ahamba naye ufuna njalo. Unomdla ngobuntu benenekazi kwaye uyakuthanda ukuheha.
Xa enomdla emntwini, uyanyamezela kwaye uyamcingela kuba uyakuthanda nje ukuleqwa. Akanomdla kangako ekwandiseni ukugqithisa kwezinye iindawo zobomi bakhe, kodwa xa esemathandweni wenza into eyahlukileyo.
ukuhambelana kobuhlobo kunye ne-sagittarius
Abantu bangathi uyila xa esondela kuthando olutsha, kodwa eneneni uhlalutya imeko kwaye amisele ukuba ubudlelwane bexesha elizayo buya kuba njani.
Kukho amaxesha apho indoda ka-Aquarius ifuna ukukhunjuzwa ukuba kufuneka ithathe inyathelo nomntu emthandayo. Ebhedini, uyafana.
Uye wongeze umdlalo weqonga kwaye ngamanye amaxesha uyalibala malunga nokuvuthwa, kumthathe ixesha elininzi lokwenza isigqibo malunga nento emayenziwe ngokulandelayo.
Kodwa ukuba ukwazile ukufikelela kwelona cala lakhe linomdla, uya kuba ngumthandi wokuyila nonamandla. Indoda ka-Aquarius ihlala iqinisekisa ukuba iqabane layo lifikelele kuvuthondaba. Ukuba ukhuthazwe ngokwaneleyo, uya kukumangalisa xa ungalindelanga.
Masiyixelele njengoko injalo
Unomdla kubafazi abayaziyo into abayifunayo, indoda yase-Aquarius ihlala ihleli ingathethi xa ilukuhlwa. Ukuba ungeze uthando kunye nenhlonipho ethile ekuhendweni, ufumana indoda ye-Aquarius eya kufuna ukuzama nantoni na ebhedini nawe.
Kwindoda ekulo mqondiso, isondo yinto yokonwaba, ithuba lokuzama izinto ezintsha. Musa ukuzibuza ukuba wenza ntoni umthandi we-Aquarius ukufunda iincwadi zesini. Uyakuthanda ukuphonononga isifundo kwaye uya kuzama yonke into kwi-Kama Sutra.
Musa ukumzalela ngesikhundla esifanayo. Uyakuthanda ukwenza ulingelo kwaye uyakwazi ukukonwabisa ngezimvo zakhe. Xa ubomi besondo butyhafisa, lo mfo uba lusizi. Ude asokole. Zama kwaye ungadimazi ukudibana kwakhe nezenzo ezingekho 'eziqhelekileyo'.
Kuye, akukho nto iyabhalwa kwaye unenkani ngokufuna ukuzama izinto ezintsha kwigumbi lokulala. Cofa kuTwitter
Ukuba nomdla omkhulu kulingo lwezesondo, uyakufumanisa uninzi lwamadoda angama-Aquarius ukuba athande ukuba neentlobano zesini. Ngenxa yokuba unomdla kakhulu kwaye unomdla wokujonga kwangaphambili, kunokwenzeka ukuba indoda ese-Aquarius ihlupheke ngenxa yokungabi namandla okanye ukulibaziseka ukunyuka.
Ukulungele ukulingwa, indoda ka-Aquarius inokuphinda izame ukugqwetha okuyingozi nayo. Ukudlala indima kunye nokunxiba kuya kuba 'yinto eqhelekileyo' kuye.
ilanga kumhlaza womhlaza kumhlaza
Awusoze ubone ndoda kulo mqondiso ukuba uwedwa. Unomoya kwaye unethemba, unabantu abaninzi abamngqongileyo. Njengokwenyani, akonwabi kwaphela xa engenabahlobo anokuchitha nabo ixesha elifanelekileyo.
Ukuba unengxaki, khangela umhlobo wakho we-Aquarius. Ngokuqinisekileyo uya kukunceda ukuyisombulula njengoko uhlala ekhangela inyani kunye nezisombululo kwimicimbi eyahlukeneyo. Uya kuhlalutya imeko kwaye azame ukuyisombulula ngokungathi yeyakhe.
Xa usethandweni, indoda ka-Aquarius iyathandabuza. Ukuba ufuna ukuthandana nalo mfo kuya kufuneka ube nguwe oza kumbetha kuqala.
Akayikhathalele into onokuba uyenza ukumtsala, ayinguye kwaphela owenza inyathelo lokuqala. Ukholelwa ngamandla ukuba abantu kufuneka babe ngabahlobo ngaphambi kokuba babe ngabathandi, ke yiba ngumhlobo wakhe kuqala. Ayisiwo mandla kuphela aqhuba le ndoda, ikwayinkululeko kunye nokuxhotyiswa.
Umsebenzi, uyile kwaye uyonwabisa, kodwa akathandi ukusebenza nzima. Uninzi luthi ama-Aquarians ngabavukeli bezodiac kwaye banyanisile.
Abantu abakulo mqondiso abakuthandi ukulawulwa nokulawulwa. Xa izinto zingasebenzi njengoko bezilindele, baba neemvakalelo kwaye babuyela kwilizwe labo ngaphakathi.
Yonke into enokwabelana ngesondo inokoyiswa ngengcinga
Inye into eqinisekileyo, indoda ye-Aquarius ayingqinelani. Akazithandi izithethe kwaye ukholelwa kuphela kwinkqubela phambili.
Disemba 21 ukuhambelana kophawu lwe-zodiac
Awuyi kuba nakho ukumgcina ebotshelelwe kuwe ixesha elide njengoko engakwazi ukuhlala ngaphandle kwenkululeko yakhe nenkululeko. Yiyo loo nto enabahlobo abaninzi abangenakubizwa ngokuba ngabahlobo abalungileyo, kodwa babazi ngakumbi.
Njengomntu wentlalo, lo mfo ulungile ekwenzeni izihlobo kwaye uhlala ekuvuyela ukudibana nabanye abantu. Kodwa ukusebenzisana kuya kuba phezulu.
Uyadika ngabantu ngokukhawuleza, ke uya kubaleka aye kwindibano elandelayo yokuhlangana ukuze ahlangane nomnye umntu. Ukuze ubambe intliziyo yale ndoda, kuya kufuneka uyibonise ukuqaphela kunye nothando. Ukuba unyanisekile kuye kwaye umbonisa ukuba uyakhathala kwaye unothando, uya kuba nengxelo ethile.
ngesondo nomntu wepisces
Nokuba wenza ntoni na, indoda yeAquarius iya kuhlala ikwimiceli mngeni emitsha. Kunokuthiwa uyaluthanda ukhuphiswano njengoko ethanda ukutsala inenekazi.
Abathetheli abalungileyo, ama-Aquarians anokuqinisekisa abanye ukuba benze nantoni na abafuna bayenze. Baninzi abalingisi abangama-Aquarians kwaye baziwa ngesakhono sabo esimangalisayo sokukhumbula ngentloko imigca yabo ngesantya esingakholelekiyo.
Yonwaba ukuba indoda ye-Aquarius iphikisana nawe. Ngabantu angabakhathalelanga, ebengathethi.
Ukuba uyazi umntu ongavulelekanga kwisini kunye namava ezesondo, mnike iintsuku ezimbalwa kubudlelwane nendoda ye-Aquarius.
uphawu lweenkwenkwezi ngoJuni 17
Ngokuqinisekileyo uya kumqinisekisa ukuba lo mbandela awunyanzelekanga ukuba ube ngumqobo kwaye idrive drive ayifuni kugcinwa itshixiwe. Nangona kunjalo, lo mfo kufuneka alumke kwaye akwazi ukuchitha onke amandla akhe ekuphulula amalungu esini nakwiminqweno yesini.
Indoda ekulo mqondiso iyakholelwa eluthandweni kwaye iya kuyikhangela. Kulula kuye ukuthandana, kodwa kunzima kakhulu ukuzinza.
Abantu abatshatileyo ama-Aquarians mhlawumbi bayayazi indlela abanethamsanqa ngayo ukuba kunye nomntu ekunzima ukubamba.
Isengqiqweni, inethemba kwaye intle, i-Aquarius inokufunda ngokulula kwabanye abantu. Uyathandwa kwaye ngelixa ebonakala ekhululekile ngaphandle, akaphumli ngaphakathi.
Unokucinga ukuba ukuba uhlala efuna izinto ezintsha kunye namava, kufuneka angathembeki. Izinto azikho kwaphela ngoluhlobo. Uhlala ezinikele kwaye udlala ngothando xa into inomdla kuye. Uya kuhlala ebuyela ekhaya, ukuba uneqabane elifanelekileyo aza kubuyela kulo.
Ukwabelana ngesondo nge-Aquarius: Izinto ezibalulekileyo kwi-Aquarius ebhedini
Ukuthandana nomntu we-Aquarius: Ngaba unayo into eyenzayo?
Ngaba Amadoda e-Aquarius anomona kwaye anamandla?
Iimpawu zomntu wase-Aquarius kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
ISouth Node eLeo: Impembelelo kuBuntu kunye noBomi
Inyanga kwiGemini Man: Mazi ngcono
Inyanga yeScorpio Sun Taurus: Ubuntu obuBonayo
Ugqibe kwaye unomdla, iScorpio Sun Taurus Moon ubuntu buyayazi ngqo into ekufanele ukuyilwela kwaye ayizukuvumela nantoni na okanye nabani na aphazamise.
Nge-31 kaDisemba i-Zodiac yiCapricorn-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Jonga iprofayili epheleleyo yokuvumisa ngeenkwenkwezi yomntu owazalwa phantsi kwe-31 kaDisemba zodiac, ebonisa uphawu lweCapricorn, ukuhambelana kothando kunye neempawu zobuntu.
Umfazi ongu-Aries emtshatweni: Ungumfazi Onjani?
Emtshatweni, umfazi we-Aries uhlala eyindoda enokhuphiswano nenomtsalane kodwa ekuhambeni kwexesha, njengomfazi onamava, uya kuyazi indlela yokungena phantsi kolusu lomyeni wakhe.
Nge-10 kaSeptemba iZodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Nantsi iprofayili epheleleyo yeenkwenkwezi yomntu owazalwa phantsi kwe-10 Septemba zodiac. Ingxelo iveza iinkcukacha zomqondiso weVirgo, ukuhambelana kothando kunye nobuntu.
ISaturn Retrograde ngo-2019: Ikuchaphazela njani
I-Saturn retrogrades kwi-2019 phakathi kwe-2 kaMeyi kunye ne-21 kaSeptemba kwaye iya kuchaphazela indlela ofunda ngayo kunye neendawo zobomi oza kuthi ucelwe umngeni kuzo.
Dragon Man Rooster Woman Ixesha elide ukuhambelana
Indoda yeDrag kunye nebhinqa likaRocker bobabini bayathandana kwaye kubonakala ngathi baneempawu ezincedisayo kwisibini sabo.
Ngomhla wama-22 kuMatshi iintsuku zokuzalwa
Le yinkcazo enomdla ngoMatshi 22 wokuzalwa kunye neentsingiselo zabo zeenkwenkwezi kunye neempawu zomqondiso we-zodiac oyi-Aries yiAstroshopee.com
Nge-14 ka-Agasti ngeZodiac nguLeo-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Nge-8 kaMeyi iZodiac yiTaurus-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Scorpio umfazi kunye nokuhambelana kwendoda eyi sagittarius
uluphawu olunjani ukuba uzalwe ngoNovemba
leo eyindoda kunye capricorn obhinqileyo
2003 unyaka webhokhwe
Abantu abazalwe ngomhla we-13
uyifumana njani indoda yam yenyani